Safarka safarka - Talooyin si loo qorsheeyo safarka ugu fiican | Wararka Safarka
Talooyin ku saabsan qorshaynta safar dalxiis
Haddii aad mar hore ka fikiraysay safar dalxiis, markaa waa wakhti fiican inaad samayso xoogaa qorsheyn ah kaamil ah. Waxba ma illoobi karno! Laakiin ma aha oo kaliya ka hadlidda boorsooyinka laakiin waxay ku saabsan tahay urur wanaagsan oo wax walba si fiican loo xidho tanina waxay bilaabmaysaa waqti hore sidaan u malaynayno.
Waan ognahay inay noqon doonto daqiiqad gaar ah, maalmo aan la iloobi karin, iyo si looga baxo waxyaalahan oo dhan, waxaa habboon in la raaco tallaabooyin taxane ah. Qorshaynta safarka dalxiiska ayaa ah midka ugu xiisaha badan Oo maadaama aanan doonayn inaad wax walba u dhaafto daqiiqadda ugu dambaysa, waxaan kugula talinaynaa oo keliya inaad ogaato waxyaabaha layaabka leh ee aan kuu hayno.
1 Dooro mid ka mid ah meelaha ugu caansan
2 Ha sugin ilaa daqiiqadda ugu dambeysa si aad u samaysato boos celinta
3 Qolkee baan doortaa
4 Waa maxay haa iyo waxa aanan ahayn inaan ku qaato shandadda
Dooro mid ka mid ah meelaha ugu caansan
Waxaa laga yaabaa inaad maanka ku hayso meel gaar ah, maxaa yeelay waa run in markaan tixgelinayno safarka dalxiiska inay sidaas noqon karto. Laakiin haddii kale, waa inaad sidoo kale tixgelisaa kuwa aadka loo dalbado, si aadan meeshaada uga dhammaan. Doomaha badda Mediterranean waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu waaweyn. Waayo? Waa hagaag, maxaa yeelay waxay na siisaa wax ka badan muuqaallo aan la ilaawi karin. The Giriigga Giriigga wuxuu kugu martiqaadayaa inaad ogaato dhammaan jasiiradaha ay ka buuxaan khuraafaadka iyo taallooyin ay tahay inaad qof ahaan ku aragto, ugu yaraan hal mar noloshaada.
Dhinac Athens, iyada oo loo sii marayo Crete, Mykonos ama Santorini. Kaliya markaan xusno waxaan ognahay inaan yeelan doonno isku -darka gaarka ah ee dhaqanka iyo xeebaha adduunka. Halka dhinaca kale, sidoo kale Doonida loo maro Kariibiyaanka ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka la dalbaday iyada oo aan la dayacin waqooyiga Yurub oo noo oggolaanaysa inaan ku raaxaysano Norway, Saint Petersburg ilaa Stockholm ama Copenhagen. Socod lagu maro fjords ama caasimadaha Baltic ayaa sidoo kale ku habboon safarkayaga dalxiiska!
Ha sugin ilaa daqiiqadda ugu dambeysa si aad u samaysato boos celinta
Maaha safar aan ku samayn karno waqti gaaban, si ka soo horjeeda. Waxa ugu fiican ayaa ah in la isku dayo in horay loo sii qorsheeyo oo haddii ay tahay riyadeena, dib dambe uma dhigi karno. Taasi waa sababta aan ku siin karin waqti caddaalad ah laakiin qiyaas ah: Sannad ka hor ayaa ugu habboon, in kasta oo ay run tahay in mararka qaarkood aan samayn karno ilaa laba sano ka hor. Haddii ay u muuqato mid aad u badan, xusuusnow taas Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka hore u -dhigista meelaynta ayaa ah inay awoodaan inay doortaan noocyada safarrada iyo sidoo kale safarradooda, helitaanka taariikhaha ama cabinnada ugu waaweyn, maxaa yeelay inta badan waa kuwii hore loo sii xareeyay. Adigoon iloobin inaad sidoo kale ka faa'iideysan karto dallacsiinta qaarkood haddii aad sida ugu dhaqsaha badan u samaysato boos celintaada. The safarrada 2022 ayaa hadda diyaar kuu ah!
Qolkee baan doortaa
Waa mid kale oo ka mid ah su'aalaha aadka loo dalbado iyo wax walba oo ka sarreeya, waa in la sheegaa in khadadka safarka ee aad u safraysid uu had iyo jeer kugula talin karo iyadoo ku xidhan nooca doonta. Wali waan kuu sheegi doonnaa taas Haddii aadan waligaa doon ku raacin, waxaa fiican inaad doorato qol ku yaal qaybta dhexe iyo sagxadda hoose. Wax kasta oo ka badan maxaa yeelay waxay ka mid tahay meelaha dhaq -dhaqaaqa doontu aad ugu yar tahay tanina waxay naga horjoogsanaysaa inaan wareerno. Qolka ku yaal qeybta hoose ayaa lagugula talinayaa marka aad dhexdeeda ku seexan doontid oo kaliya ku filan. Taa bedelkeeda, haddii aad u malaynayso inaad waqti badan ku qaadan karto nasasho, markaa isku day inaad ka fogeyso meelaha ay dad badani isugu yimaadaan.
Waa maxay haa iyo waxa aanan ahayn inaan ku qaato shandadda
Xirxiriddu waa mid kale oo ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee safar kasta oo qiimihiisu yahay milixdiisa. Sidaa darteed, ma jiraan wax la mid ah sharadka abaabulkiisa iyo sidoo kale. Waxaan si buuxda u ilownaa weedha ah 'Xaalad kaliya' maxaa yeelay aakhirka waxaan isku aragnaa shandad ka sarreysa kiilo la oggol yahay. Sidaas, xusuusnow inaad xirato dhar raaxo leh maalinta oo leh kabo aan simbiriirixan. Labaduba inay saaran yihiin doonnida iyo inay dalxiis u baxaan, in kasta oo halkan aan ku beddeli doonno qaabka kabaha.
Habeenkii, waa run in mararka qaarkood aan heli doonno casho xoogaa aan rasmi ahayn. Markaa waxaad ku dari kartaa maryo sidoo kale ah. Dharka isboortiga iyo dharka qubayska ayaa iyagana loo baahan doonaa. In kasta oo ay tahay inaad ogaato haddii aad hore ugu jirtay, had iyo jeer waxaad ku qaadan kartaa gasacadahaaga ama shaambadaada gasacadaha yaryar. Laakiin haa, ha u keenin qalajiyaha ama birta timaha ama dharka. Sababtoo ah waa wax aan inta badan la oggolayn. Marka, si fiican diirada u saar dharka, qalabka iyo dabcan, cadayga ama mobilada oo aadan iloobin. Dabcan, waa inaad ku dartaa baasaboorka iyo kaarka tallaalka labadaba. Waxaad diyaar u tahay inaad ku dhoofto waxa noqon doona fasaxa ugu fiican noloshaada!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Cruceros » Talooyin ku saabsan qorshaynta safar dalxiis